Careers - Myint Myint Khin
You can buy Myint Myint Khin Htou Mou from this store
The enterprise organizedaMMK Myanmar Traditional Snacks Company in accordance with Myanmar Company Acts in 2016. And then MMK enterprise transformed vertical organization to horizontal organization. Company was finding the benefits of incorporating horizontal organizational structure in the workplace such as Production team, Administration and Human Resources Management team, Marketing and Finance. The horizontal organizational structure emphasizes an employee-centered approach with emphasis on teamwork and collaboration. This allows for workers to focus and invest time and energy on company goals.
An employee-centered approach to leadership is an important aspect of horizontal organizational structure that has gained attention in the past few years. The horizontal organizational structure and the employee-centered approach to leadership focus on the ability of employees to come up with innovative solutions. It empowers employees by emphasizing training and giving employees the tools needed to succeed.
Horizontal organizational structure in an organization places emphasis on the collective goal of the company. Unlike the vertical organizational structure where emphasis is placed on the individual, the organizational structure emphasizes teamwork. The focus is on the processes and procedures that directly affect products rather than individual jobs.
One of the important factor is to be considered is to run the training courses for our employees so that they could be skillful enough to take relevant tasks in our business. Likewise, we employers or entrepreneurs also have to do the relevant training courses too. Here many challenges occur. To give an example, last year, we organized the training course of Finance Department ERP software. The employees were not qualified enough to take it till it is complete so some even cried, some quit the job. Complaints were heard too. It didn’t seem to be as easy as the previous software training courses.
Since horizontal organizational structure emphasizes the group, whenagroup works well together, everyone benefits. Each individual has an incentive for the group to succeed. Rather thanapower-struggle, the focus group is working toward achieving the goal. Economic incentives can be tied to performance.
Increasing worker job satisfaction has shown to increase worker motivation, which in turn, increases productivity. The horizontal organizational structure may help to increase job satisfaction, since emphasis is placed on creating an inclusive workplace culture and environment. Value is placed on openness, cooperation and collaboration.
အောက်ပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည် သင်၏အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက သင်၏ကိုယ်ရေးအကျဥ်း၊ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူး၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် အပြည့်အစုံဖြင့် hr@myintmyintkhin.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လစ်လပ်သော ရာထူးရှိပါက ပေးပိုးထားသာ email များထဲမှ စီစစ်ရွေးချယ် ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
1. General Manger
Management နှင့် ပတ်သက်သည့် ဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်
စက်ရုံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၇ နှစ်ရှိရမည်။
အသက် ၄၅ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။စက်ရုံတစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများအား တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Computer World , Excel & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
CPA (သို့) ACCA ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၇ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ Finance နှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများကို အကြံပြုတင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Financial Budget ရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အသက် ၄၀ နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
Computer (Microsoft Word,Excel,Power Point) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Internet , Email အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဘွဲ့ရ (သို့) Management နှင့်ပတ်သက်သည့် ဒီပလိုမာ ရရှိသူ
စက်ရုံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ရှိရမည်။
အသက် ၃၅ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်ကြား ဖြစ်ရမည်။
Computer , Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
5. Admin Manager
တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
Admin နှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်ရှိရမည်။
အသက် ၃၅ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
MBA (သို့) HR နှင့်ပတ်သက်သည့် ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
HRနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်ရှိရမည်။
LCCI Level I II III ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
အသက် ၃၅ နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
8. Assistant Chief Accountant
စီးပွားရေးဘွဲ့ရ ရှိသူ (သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရ
Computer Advance Excel , စာရင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် Software များ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၄ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
အသက် ၃၀ နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
9. Assistant Production Manager
စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
ဆိုင်များမှ လိုအပ်သော မုန့်များကို အချိန်မှီ ပို့နိုင်ရန် ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းကို စီစဉ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဒိုင်ဆင်းနိုင်သူ ၊ လိုအပ်ပါက ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၄ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
အသက် ၄၅ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းအား လိုက်နာအောင် ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
12. Warehouse Supervisor(Raw)
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
13. Warehouse Supervisor(Finish Good)
15. Senior Accountant
16. Senior Cashier
17. Senior Sale
အရောင်း နှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။
အသက် ၂၀ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
18. HR Assistant
ဘွဲ့ရ (သို့) HR နှင့်ပတ်သက်သည့် ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
HRနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။
အသက် ၂၅ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
Computer (Microsoft Word,Excel,Power Point) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၂ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
LCCI Level I II ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
ကုန်ကြမ်းစာရင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော လယ်ဂျာများကို မှန်ကန်အောင်သွင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ (သို့) အထက်တန်းအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။
23. Warehouse Keeper / Store Keeper
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၁နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
အသက် ၂၀ နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
ကုန်ကြမ်းအဝင်များကို သေချာစွာ စစ်ဆေးပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
24. Junior Accountant
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၁ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
25. Junior Cashier
26. HR Staff
27. Admin Staff
တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ(သို့)အထက်တန်းအောင်မြင်သူ
ဆိုင်အမှာစာရင်းများ တင်ပေးရာတွင် မှားယွင်းမှုများရှိပါက တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းအရေအတွက်များကို အချိန်မှီပြီးစီးအောင် ပါကင်စက်မောင်းနိုင်ရမည်။
အသက် ၄၀ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းအရေအတွက်များကို အချိန်မှီပြီးစီးအောင် တံဆိပ်ရိုက်ပေးနိုင်ရမည်။
အသက် ၁၈ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
35. မုန့်ဖာ တင်၊ချ
36. ဂိတ်စောင့် ၊ လုံခြုံရေး (ဆိုင်ကယ်)